အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒေသခံနှင့် streaming ဂီတဖွင့် | Androidsis
Francisco Ruiz | | Android application များ, အခမဲ့ဂီတ, လွှ, လဲ tutorial
ကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကိုဗီဒီယိုပို့စ်တစ်ခုနှင့်အတူပြန်လာ, ဤအချိန်အကြံပြုဖို့ streaming များနှင့် local music player application ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ download လုပ်နိုင်တယ်၊ ငါကိုလုံးဝချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာထူးခြားချက်တွေအများကြီးပေးတယ်။
သူတို့ထဲကအထင်ရှားဆုံးက၏ဘေးထွက်ကနေလာပါတယ် တေးဂီတရှာဖွေခြင်းနှင့် YouTube မှတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းအသံသာဖြစ်သည်ဗွီဒီယိုတင်စရာမလိုပဲ။ ဒါကနှင့်အတူဒွန်တွဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပြီးမျက်နှာပြင်ပိတ်ပြီးနားထောင်နိုင်သည်Android အတွက်အခမဲ့ဂီတဖွင့်စက်မှပေးသောအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များသည်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်၏ Android terminal တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ထားမည်ဟုကျွန်ုပ်အာမခံသည်။
စတင်ရန်ဤအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောအပလီကေးရှင်းသည်နာမတော်ကိုတုန့်ပြန်သည် Suamp - အသံမီဒီယာဖွင့်စက်မဖြစ်နိုင်ပုံရသော်လည်းအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်သည် Google Play စတိုးမှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါAndroid အတွက်တရားဝင် application store ဖြစ်သည်။
ဤလိုင်းများအောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Google Market မှလျှောက်လွှာကိုအခမဲ့ download ရယူရန်အတွက်တိုက်ရိုက် link တစ်ခုချန်ထားပါမည်။
1 Suamp - Google Play Store မှအသံမီဒီယာဖွင့်စက်ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
2 Suamp မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံး၊ သင့်ဒေသတွင်းနှင့် streaming ဂီတဖွင့်စက်ကိုသင့်အားထိခိုက်လိမ့်မည်
3 ဒေါင်လိုက်ပုံစံဖြင့် Suamp ၏ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်
Suamp - Google Play Store မှအသံမီဒီယာဖွင့်စက်ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
Suamp - ဂီတဖွင့်စက်
Suamp မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံး၊ သင့်ဒေသတွင်းနှင့် streaming ဂီတဖွင့်စက်ကိုသင့်အားထိခိုက်လိမ့်မည်
ဒီ၏အကြီးမားဆုံးပိုင်ထိုက်သော ရိုးရှင်းသောဒေသခံဂီတဖွင့်စက်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော streaming ဂီတဖွင့်စက်YouTube ဂီတစာကြည့်တိုက်မှဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တိကျစွာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ YouTube ဂီတစာကြည့်တိုက်မှ၊ မည်သည့်ဗီဒီယို၊ ဂီတကိုဖြစ်စေ၊ မလွှင့်ထုတ်လွှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဂီတသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်လူကြိုက်များသော Google ဖန်တီးသူဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းတွင်တည်ရှိသည်။
သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းထားသည့်အရာအားလုံးမဟုတ်ပါ မျက်နှာပြင်ပိတ်ထားသည့်အချိန်မှပင်အသံကိုသာနားထောင်ရန် YouTube တွင်တင်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖွင့်စရာစာရင်းများဖန်တီးခြင်းနှင့်မှာယူခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျုအကောင့်တွင်ဖန်တီးပြီးသောသီချင်းစာရင်းများကိုပင်ထပ်တူပြုခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ YouTube မှထုတ်လွှင့်သည့်ဂီတကိုနားထောင်ရန်အကောင်းဆုံးအသုံးချဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသံသယမရှိပါ။
ဤအပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube ဖွင့်ရန်စာရင်းများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်စေသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် Playlists ကဏ္inတွင်အမှာစာများလိုချင်သည့်အကောင့်များစွာရှိသည့်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့အန်းဒရွိုက်၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်သို့တိုက်ရိုက် download လုပ်ထားသောဒေသခံဂီတသို့မဟုတ်ဂီတကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ Youtube Playlists
သတိပြုသင့်သည် Suamp သည်အသံသွင်းရန်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခုမဟုတ်ပါFacebook ကိုလွှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကို YouTube မှသီချင်းများ၊ ဆောင်ပုဒ်များသို့မဟုတ်စာရင်းများကိုအများဆုံးထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်အများဆုံးမျှဝေခြင်းကိုခွင့်ပြုနိုင်သည်။
ပို့စ်ရဲ့အစမှာသင့်ကိုထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ Suamp ကကျွန်တော်ကိုပေးသမျှအရာအားလုံးကိုပြတယ် ကျွန်ုပ်၏ Youtube playlists ကိုမျက်နှာပြင်ပိတ်ပြီးနားထောင်ရန်အကောင်းဆုံး application များထဲမှတစ်ခု.
ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်၏ Android စက်ကိုအလျားလိုက်ထည့်စရာမလိုဘဲမျက်နှာပြင်အပြည့်ပုံတူပုံစံအသစ်, ထို့နောက်ငါသင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်စွန့်ခွာသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်
ဒေါင်လိုက်ပုံစံဖြင့် Suamp ၏ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်
ဒီ app ကိုကြိုက်လား? ဒေါင်လိုက်ဗွီဒီယိုအမျိုးအစား (သို့) စံပုံစံကိုသင်ပိုနှစ်သက်လား။။ သင်ဤပုံစံနှစ်ခုလုံးအတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်လိုပါသလား။ သင်၏ထင်မြင်ချက်သည် Androidsis အတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုချန်ထားပါ။ သင်၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာဗီဒီယိုတွင်သင်၏ Like ကိုထားရန်မမေ့ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒေသခံဂီတဖွင့်စက်နှင့်အခမဲ့လွှင့်ထုတ်သည်
Samsung Gear S3 သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုဖြေဆိုရန်ခွင့်ပြုချက်အသစ်ရရှိသည်